Export Projects ma ọ bụ Video si iMovie
All i nwere mara banyere iMovie: Atụmatụ, Tutorial, Alternatives na Ọzọ
Na-ekpuchi akụkụ nile nke iMovie: Atụmatụ, nkuzi, ọzọ, nchọpụta nsogbu na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị a Windows ọrụ na onye chọrọ ka n'ụlọ fim na ezi video edezi software, Anyị na-akwado niile-na-otu iMovie maka PC omume.
1.1 WMV ka iMovie
1.2 MTS ka iMovie
1.3 FLV ka iMovie
1.4 MOV ka iMovie
1.5 M4V ka imovie
1.6 VOB ka iMovie
1.7 mpg ka iMovie
1.8 MOD ka iMovie
1.9 AVCHD ka iMovie
1.10 AVI ka iMovie
2.1 Tinye Text / ndepụta okwu / Captions
2.2 Tinye Music ka iMovie
Ma gụọ 2.3 iMovie mmetụta
2.4 iMovie Green ihuenyo
2.6 Foto dị na Foto dị
2.7 Mepụta ngwa Motion
2.8 Bugharia Video
2.9 Split ihuenyo
2,10 Tinye iMovie ikwu n'ụzọ
2,11 Mee a Time-Lapse Movie
2.12 iMovie Kwụsị Motion
2,13 Split Clip
2,14 n'Ubi a Video
2,15 Voiceover na iMovie
2,16 Set akụkụ ruru
2,17 Fast Gaanụ n'Ihu
2,18 ibubaa iMovie
2,19 akawanye shaky Videos na iMovie
3.2 iMovie ka iTunes Library
3.3 Tinye nzacha ka iMovie
3.4 Save iMovie Projects
3.5 YouTube Videos ka iMovie
3.6 Export iMovie Projects
3.7 iMovie ka DVD
3.8 iMovie Video ka iCloud
4.1 Alternatives maka PC
4.2 Alternatives maka Android
4.3 Online iMovie Alternatives
5 Atụmatụ & Aghụghọ
5.5 iMovie Gburugburu / Templates
5.7 iMovie n'Otu
5.9 iMove ngwa mgbakwunye
5,10 iMovie 9 Atụmatụ
5,11 iMovie 10 Atụmatụ
5,12 iMovie 11 Atụmatụ
5,13 ihuenyo Capture
Ụzọ dị iche iche mbupụ iMovie Projects
Mgbe ha niile edezi a mere, gị na oru ngo a ga-exported n'ihi ya ọ pụrụ adị dị ka a nkiri. E nwere ụzọ dị iche iche mbupụ gị video: mechaa oru ngo, ichekwa na a dijitalụ format ma ọ bụ bulite online. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime ndị nkịtị ụzọ mbupụ gị oru ngo Ozugbo edezi abịawo njedebe.
Nkebi nke 1: mechaa iMovie oru ngo Part 2: Export iMovie iche iche formats Part 3: Export iMovie ka weebụsaịtị ka YouTube
Nkebi nke 1: mechaa iMovie oru ngo
Ịgbacha iMovie oru ngo pụtara na ị ka iMovie-akwadebe ihe nkiri na niile nke na o kwere omume nha n'ihi na-ebugote ka YouTube, MobileMe, ụfọdụ ndị ọzọ video nkekọrịta saịtị, wdg Ọkara, nnukwu, na HD videos niile ga-sụgharịrị. Ndị sụgharịrị oru ngo ga-emeghe na iMovie, ma ga-emeghe na ndabere gị mgbasa ozi ọkpụkpọ. Na ọ bụrụ na ị mechaa a oru ngo tupu i na-oru ngo, mgbe i na-oru ngo, iMovie agaghị ajụ gị ka ị na-ahọrọ na-video size n'ihi na oru ngo nke finalizing oru ngo, iMovie esetịpụwo videos ntọala maka gị. I nwere ike iso nzọụkwụ n'okpuru ịgbacha gị iMovie oru ngo.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a oru ngo
Na Project Library, họrọ a dechara oru ngo ịgbacha n'ihi na mgbe ị mechaa oru ngo na iMovie, ọ bụrụ na ị na-eme mgbanwe ọ bụla na-nkiri, mgbe ahụ fọrọ nsụgharị ga-discarded.
Nzọụkwụ 2. mechaa oru ngo
Gaa Files> mechaa Project na isi menu na-amalite ịgbacha iMovie oru ngo. Usoro nwere ike iri a mgbe dabere na size ma ọ bụ gị oru ngo.
Mgbe finalizing dialog kpamkpam, ọ pụtara na usoro nke finalizing oru ngo ka dechara.
Nkebi nke 2: Export iMovie iche iche formats
Ozugbo ị gụsịrị edezi gị nkiri, ị nwere ike mbupụ ya dị iche iche formats. Dị nnọọ aga Ekekọrịta> Export iji QuickTime ... ma họrọ otu nhọrọ si menu. Ma biko na-achọpụta na, iMovie nanị na-akwado ole na ole nke formats dị ka MP4, 3GP, M4V, AVI, FLC, MOV na DV. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta gị iMovie e kere eke ndị ọzọ formats dị ka WMV, FLV, MKV, VOB na ndị ọzọ, i nwere iji tọghata gị iMovie ndị ọzọ formats na a 3rd Party Ntụgharị.
Ebe a Video Converter Ultimate for Mac - ihe niile na-na-otu iMovie Ntụgharị ukwuu tụrụ aro. Ọ atọghata iMovie videos iche iche formats dị ka MP4, WMV, FLV, MKV ma na-enye kachasị presets maka Final Cut Pro, iPhone, iPad, iPod na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1. Bulite video faịlụ
Nanị ịzọpụta gị iMovie dị ka .mov faịlụ. Mgbe ahụ, pịa File> Bulite Media Files bulite ha n'elu Video Converter Ultimate. Nhọrọ, ị nwere ike na-ịdọrọ na dobe gị mgbasa ozi faịlụ a video Ntụgharị.
Nzọụkwụ 2. tọghata iMovie video faịlụ
The Video Converter Ultimate akwado a ibu nso nke mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ. Iji tọghata na mbupụ gị iMovie ndị ọzọ formats, họrọ a format ke Video toolbar na ala nke ihuenyo na pịa tọghata.
Nzọụkwụ 3. Malite converting ma ọ bụ na-ere ọkụ gị iMovie faịlụ
Mgbe ihe nile dị njikere, see "tọghata" button, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike tọghata iMovie ka a kwesịrị ekwesị faịlụ Ọkpụkpọ.
Nkebi nke 3: Export iMovie ka weebụsaịtị ka YouTube
I nwekwara ike ịkọrọ gị iMovie e kere eke na ihe ndị mmadụ. Na-ebugote iMovie ka online bụ ezi nhọrọ. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ na ụfọdụ Atụmatụ mbupụ iMovie ka weebụsaịtị ka YouTube.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a nkiri bulite na-emeghe YouTube na-ekere òkè window
Họrọ a dechara nkiri na ị chọrọ bulite ka YouTube site na ịpị ya na Project Library. Mgbe ahụ gaa isi menu ma họrọ Share> YouTube imeghe YouTube bulite menu.
Nzọụkwụ 2. Wet ke gị YouTube akaụntụ na ozi ndị ọzọ
Pịa Tinye button ịgbakwunye gị YouTube akaụntụ ma jupụta na gị YouTube aha akaụntụ na paswọọdụ. Mgbe ahụ jupụta na aha, nkọwa, mkpado banyere gị nkiri. Ị nwere ike ịhọrọ a Atiya n'ihi na gị nkiri na udi. Ndị a ọmụma ga-eme ka gị nkiri ọzọ mfe chọta ndị ọzọ na YouTube. Mgbe ị na-wuchaa ya, kụrụ "Emela" ịzọpụta.
Nzọụkwụ 3. Họrọ ebipụta size ma na-eso iMovie ka YouTube
iMovie nwere ike bulite gị nkiri ka YouTube na otu nke anọ nha, na ị nwere ike họrọ onye dị ka amasị gị. Mgbe ị na-ahọrọ na-ebipụta size, ugbu a pịa "Ekem" na mgbe YouTube okwu nke ọrụ oghe, kụrụ "Asuanetop" na-amalite bulite iMovie ka YouTube ịkọrọ ezinụlọ na ndị enyi.
Mgbe gị na nkiri e uploaded YouTube, a window dị ka n'okpuru ga-emeghe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa enyi na ị uploaded otu nkiri ka YouTube, ị nwere ike họrọ "Gwa a Enyi" ka ziga YouTube njikọ site na E-mail. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-ele gị video on YouTube, họrọ "View". Ma ọ bụrụ na nnọọ na ị chọrọ ịlaghachi iMovie, see "OK".
Olee otú Mepụta Animated Maps na iMovie
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka Videos na Movies na iMovie
Olee otú Tinye Sound mmetụta na iMovie
iMovie:-atụ aro iMovie Plugins & Bara Uru Ngwaọrụ
iMovie Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ iMovie Files
Olee otú Jiri iMovie Ken Burns mmetụta na Wepụ iMovie Ken Burns
5 Atụmatụ maka iMovie nkiri na Mac
Olee otú mbubata mod ka iMovie
Video cropping on iMovie na Wondershare Video Ntụgharị
Olee otú ike iMovie nkwụsị ngagharị
iMovie Tutorial: ịmụta otú iji iMovie
Olee otú akawanye shaky Videos na iMovie
> Resource> iMovie> iMovie: Export Projects ma ọ bụ Video si iMovie